Souce Factory - China Souce Vagadziri, Vatengesi
Yakasarudzwa yemhando yepamusoro mupunga, donhwe rega rega revhiniga rine hutano uye rakachengeteka
Panzvimbo yeshuga chena, mupunga wevhiniga wakasanganiswa neuchi zvakanyatso sanganiswa kuita kuti kuravira kuve kwakasviba uye kutapira uye kunhuwirira.
Nguva yakaringana yekuvira kwechisikigo, kugona kwemaawa uye hunyanzvi pamwechete.
Soft acid kuravira, kuravira kwakapfava, kwakakodzera pakubika miriwo uye hove dzegungwa, inotonhora saradhi, nyura muchikafu.
Yakagadzirwa kubva kune yakashongedzwa sesame mbeu uye nzungu tsanga, iyo yakavhenganiswa sesame pasita ibvu gobvu, shava, ine yakasimba, yakasarudzika nutty hwema. Inoshandiswa zvakanyanya muChinese kana kuAsia chikafu, chema noodles, saradhi, inopisa-hari yekudhira muto, bhudzi rakamonyoroka buns kana kungopararira senzungu ruomba. Kazhinji inotengeswa mumidziyo yegirazi, iine mafuta pamusoro kumusoro kuchengetedza kutsva kwayo. Kupaka kwakawanda uye sevhisi yeOEM inowanikwa, gamuchirai kutumira zvamunoda kwatiri.
Yakagadzirwa kubva kune yakashongedzwa sesame mhodzi, sesame paste ine gobvu, shava puru, ine yakasimba, yakasarudzika nutty hwema. Inoshandiswa zvakanyanya muChinese kana kuAsia chikafu, chema noodles, saradhi, inopisa-hari yekudhira muto, bhudzi rakamonyoroka buns kana kungopararira senzungu ruomba. Kazhinji inotengeswa mumidziyo yegirazi, iine mafuta pamusoro kumusoro kuchengetedza kutsva kwayo. Kupaka kwakawanda uye sevhisi yeOEM inowanikwa, gamuchirai kutumira zvamunoda kwatiri.
Organic soy muto inoreva muto wesoya wakabikwa nezvirimwa zvakasikwa sezvinhu zvakasvibirira. Organic soya muto une hupfumi hwema soy muto uye mafuta, iri isingawanzo yemhando yekumwaya, inokodzera kunyikwa, yakashongedzwa musoy muto, kuzadza, muto, kurunga-fry, nezvimwe. Inotenderwa neNational Organic Chikafu Agency sechikafu chekudya, chakachena uye chine hutano kupfuura chikafu chemavara.
Nyowani yekuravira chiitiko cherosi nevhiniga
Akasarudzwa anodyiwa maruva, mushure mekuvira kwechisikigo, yedu rose vhiniga mvura yakajeka, inonhuhwirira, ine muto wakasviba uye zvishoma inotapira.
Nzira nyowani dzevhiniga yekumwa:
Sanganisa rini vhiniga muna 1: 6 uye uzvisanganise neuchi maererano nekuravira kwako. Nakidzwa nekunhuwirira kwemaruva uye zvako hwema.
Ponzu Soy Sauce (Kucheka Sauce)
Ponzu soy muto unogadzirwa kubva kuJapan dhizaina sosi muto uye yakanyatsoiswa muto wemonimu, saka chigadzirwa chekupedzisira chinonaka kutsva, kunhuwirira kunhuhwirira uye kubatana kwakanaka. Iyo ine chiyero chakakwana chemunyu, chinotapira uye chinotapira kusimudzira zvinonaka zve nyama yakabikwa, huku, hove dzegungwa kana miriwo. Iyo inokodzera kunyurura madomasi, bhengi uye saladhi.
Ladyfinger Cookie, Hawthorn Strip, Kudya Nzungu Dzakarungwa, Soy Sauce Mapaketi, Mutsva Bean Curd Stick, Vana Mabhisikiti,